Taammanaa Bitimaa:- Mandaroota fi Magaalaawwan Oromiyaa (“Oromian Towns and Cities”) – Kutaa Saddeettaffaa | Fighting for Freedom and Equality
Taammanaa Bitimaa:- Mandaroota fi Magaalaawwan Oromiyaa (“Oromian Towns and Cities”) – Kutaa Saddeettaffaa
Posted by Gishe Abdi Wako on August 22, 2015
Posted: Hagayya/August 22, 2015 ·
Taammanaa Bitimaa irraa***
Kunoo, otuma kana walitti himaa deemnuu magaalaa Shaggar irraa bayaa jirra. Amma Kaarra Halloo geenyee jirra. Karaa kanaan daangaan magaalmataa (“capital city“) Oromiyaa, jechuun kan Finfinnee, Kaara Halloo kana. “Kaarra” jechuun lafa diriiraa tulluuwwan yookaan gaarran lama jidduutti argamu. Isa Afaan Ingiliziitiin “mountain pass” jedhamu sani. Kaarra Halloo irraa gara fuula Bishooftuu-tiin gaara guddicha Erer agartu. Gara fuula Salaaletiin immoo gooroo (“mountain range“) Eekkaa agartu. Kunoo, amma randa Kaarra Halloo gadi-bu’uun mandara Laga Xaafoo (1) isa laga “Xaafoo” jedhamu irratti hundeeffame geenyeerra. Magaalattiin ishiin nu fuunduraan muldhattu tun immoo Laga Daadhii (2) jedhamti. Karaa isa as irraa gara fuula bahaatti qajeelu kanatu, hiida (“damm“) Laga Daadhii isa Shaggar guutuu dheebuu baasaa jiruu nama geessa. Lagni Xaafoo Laga Daadhiitti yaa’a. Lagni Daadhii kun immoo laga Qabbanaatti, lagni Qabbanaa laga Awaashitti yaa’a. Yoo kan feetan taye gara hiida Laga Daadhiitti gorree, daadhii keessayyuu isa booka kan hamma Shanootti dhugaa deemnu gomboo keenyatti waraabbachuu dandeenya!
Kunoo otoodhuma biyya abbaa keenyaa bareedaa kana daawwachaa deemnu, Finfinnee irraa wantee (kiilomeetira) 30 fagaachuun magaalaa Sandaafa-a (3) dhaqqabnee jirra. Magaalaan kun bara Hayila-Sillaasee waan Kolleejiin Foolisii asitti ijaarameef, kanaan beekamaa dhufe. Hardha immoo basaaftota warra Wayyaanee isaan gandeen Oromiyaa mara labanii galuun uummata keenya basaasantu asitti leenjifamee baya. Keettoowwan warra Habashaa kun isaan duriis tahee isaan ammaa summii Oromummaa ti. Isaantu Oromummaa keenya summeessaa Toopphiyummaa warra Habashaa nutti biifa jechaa dha. Oromoo Tuulamaa keessaa gosni naannoo kana jiru, Eekkaa kan jedhamu. Dur Eekkaan laga Qabbanaa isa Shaggar keessaa irraa ka’uun as dhaqqabaayyu. Uummata Oromoo Eekkaa isa Shaggar keessaa warri abbaa-buqqisaa akkuma Oromoota Gullallee waan buqqisaniif, inni amma Kaarra Halloo irraa ka’uun, Laga Xaafoo, Lagaa Daadhii fi Sandaafa irraan qaariyuun hamma magaalaa Bakkee faatti jira. Egaa, nafxanyyooni Habashaa: Aannoleetti, Calanqootti, Darraa fi Gullallee faatti uummata Oromoo hamma dandayaan fixanillee, Oromoon: Arsiis, Afran Qalloos,Darraanis, Eekkaanis, Gullalleen faas mararfannoo Waaqatiin hafanii hardhas numa jiru. Garuu, Oromoonni Gullallee, Eekkaa fi Galaan faa isaan mararfannoo Waaqatiin lafarraa-duguuggaa Minilik naazichaa irraa hafan, amma waraana warra Wayyaanee-tiin gaadamanii buqqifamaa jiru. Eekaa, seenaan Oromoo inni imimmaanii fi dhiiga uummata Oromootiin faalamaa waggaalee 140 keessa kutee as gaye kun, kunoo ammas ijjeen teenya fi ijjeen Dhaloota Qubee duratti ittuma fufee jira. Kan itti-fufiinsi kun dhaabatu irree saba Oromoo waltahuun akka sibiilaatti jabaatee, harqoota gabrummaa ofirraa darbatee caccabsuun qofa!
Daadhiin Bakkee kan naannoo biyya Laga daadhii kun akkam ture-ree? Kunoo amma magaalaa Bakkee kana irraa gara wantee 10 gara fuula Wallootti deemuun daangaa Oromoo Eekkaa fi Oromoo Abbichuu, isa karaa kanaan Abbichuu Galaan jedhamuu dhaqqabneeti jirra. Magaalattiin xiqqashoo amma seenaa jirru tun Addallaa (5) jedhamti. Ilaa, ufrufni sonaan baldhaan ijji namaa ilaalee fixuu hin dandeenye kun Sagalee jedhama. Urufni Sagalee kun karaa fuula Salaaletiin naannoo Oromoo Jiddaatiin daangeffama. Naannoo kanatti gosolii Oromoo kanneen qaama Oromoo Tuulamaa tahan daran beekamoo: Galaan, Jidda, Abbichuu fi Jirruu-tu jiru. Seenaa Oromoo fi seenaa Toopphiyaa keessatti waayee Duula Sagalee jedhamuu ni yaadattu. Urufa sagalee amma akka ennaa sanaa sangaa fardaa Oromootinii mitii, konkolaataa Faranjiitiin keessa gulufaa jirtan kana irratti kan Duulli Sagalee sun adeemsifame. Waraanni kun waraanaOromoota Walloo fi Habashoota jidduutti adeemsifame ture. “Mee massaa ka’umsa waraana kanaa nutti himi“, jechuun keessan waan hin oolleef kanaa gaditti gabaabinaan isinii dhiyeeffama.
Kunoo, otoodhuma seenaa Oromoo keessaa waa walitti himaa deemnuu, magaalaa Shanoo (6) isa Finfinnee irraa wantee 70 fagaatu geenyee jirra. Amma siree qabachuun asuma bulla jechaa dha. Faaraan rafaatii daddhabbii ofirraa calaasaa! Boru waaree keessa (naannoo sa’aa afurii) akka asii kaanu, mee hin irraanfatinaa!
Dr. T. Bosonaa kunoo akkana jedha: “Magaalaa Qarree-Goohaa kana booda ”Gohaa-Tsiyoon” jedhanii moggaasani. Oromoon naannawa sanii garuu, hanga har’aattuu Qarree-Goohaa jedheet waama. — Qarree-Goohaa kan jedhamteef magaalaan tun baddaa (high land) irraa gara gammoojjii gombisaa laga Abbayyaa yeroo seenan qarree (end of high land) gubbaatti waan argamtuufi. Qarree kana gubbaa irraa yeroo sagalee gadhiisan gammoojjitti gadi gigimsa. Kanaaf ’Goohaa’n itti dabalamee Qarree-Goohaa jedhamte, jedhu manguddoonni naannoo sanii.”
7) Kutaa Torbaffaa
** Mee Taammanaa Bitimaa: MAQAALEE KIRISTINNAA LAFA OROMOO: gadaa.com, ilaalaa!
*** Taammanaa Bitimaa: gurree@web.de
← Hidhamtooti Siyaasaa Oromoo Shan Gadhiifaman!
QUBA QABDUU LAATA? →